Banyere Anyị - China Special Metal Group Limited
Smelted slag Usoro equipments maka Metallurgy
Nyefee ladle na-agbaze Onodi
Chain ji kpachie oghere igwe
Cement & Mining Machinery
Vetikal Mill na mapụtara Parts
Rotary n'ekwú wee mapụtara Parts maka Rotary n'ekwú ọkụ
Ball Mill na mapụtara Parts
Ọla kọpa Foil Manufacturing Facilities
mgbapụta ọnwụ sọ
China Special Metal Group Limited (CSM) , a soplaya Metallurgical Machinery, Cement & Mining ígwè, Ọla kọpa Foil Manufacturing Facilities, ji na-enye elu àgwà nke slag ite, nēfe ladle, ingot ebu, Vetikal Mill, elu-nkenke machining ngwaahịa, na welded fabrications na kpọrọ ahịa si n'ụwa nile. Ka ọ dịgodị, anyị na-enye imewe engineering na turnkey ngo dị ka mma.
Ìgwè anyị nwere anọ tumadi n'ichepụta bases. Nkedo bases na Xinxiang na Yiyang; na ịgbado ọkụ Ụgha isi ke Wuxi; Special alloy isi ke Xi'an. Anyị Shanghai isi bụ azụmahịa na engineering center. Anyị nwere onwe anyị ISO 9001 akwụkwọ.
- Anyị nwere 2 tent nke 30 ton alkaline electric aak ọkụ; 8sets nke na-ebufe ladle na ike nke 35ton, 50tons, na 75tons; 2 tent nke butere irenti; 4 tent nke nnukwu okpomọkụ omume ọkụ na-akwado ụlọ ọrụ gụnyere oxygen ọgbọ ọdụ, ikuku mkpakọ osisi, eke gas ọdụ, CO ojii na 22 tent nke eweli ngwá ígwè ọrụ. The-ebuli ike esịmde 200tons. Anyị nwere 5 tent nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ ịkpụzi akụrụngwa. Ka ọ dịgodị, anyị nwekwara ihe GS1000 agụụ kpọmkwem ọgụgụ spectrometer mere OBLF na ndị ọzọ na nnyocha equipments ka carbon sulfide elu-ọsọ analyzer, microcomputer atọ ọcha nke elu-ọsọ analyzer, digital ultrasonic oghom detector, multipurpose magnetik powder oghom detector dị ka chemical ngwá, ma e wezụga na anyị na-efe leveraged eluigwe na ala ike tester, nwa thumping igwe. Simulating na nēfe usoro site CAE software na ana achi achi ọhụrụ àgwà larịị oge ọgbụgba. All na oge ọgbụgba bụ usoro site aak gouging, carbon dioxide gas gouging, shot-blasted iji nweta elu àgwà.
- Anyị nwere CNC machining center, nke a kwadebere n'ụzọ site elu igwe dị ka vetikal lathe nke OD2.5M, OD4M, OD5M, OD6.3M, OD8M, OD10M; gia hobbing igwe nke OD3.15M, OD3.2M, OD5M, OD6.8M, OD8M, OD10M; W250G CNC-agwụ ike na-egwe ọka igwe; XK2755 * 200/25 20 CNC girder-ịtọ mobile na-agwụ ike na-egwe ọka lathe; T6920 arọ na-agwụ ike na-egwe ọka igwe; anya-akara oghe aak ịgbado ọkụ igwe; 150T akpaka submerged aak ịgbado ọkụ; OD6.2 * 20m cylinder lathe; CNC plasma ọnwụ igwe; CNC ọkụ ịcha igwe; 16M ihu atụmatụ igwe; 150T gantry kreenu.
Anyị na ngwaahịa na-agụnye Metallurgical ngwá, Cement ígwè, Mining ígwè, Hydraulic na Ọdụdọ Machinery, Construction ígwè, Wind Power ọgbọ, wdg The oge ọgbụgba agaghị ere arọ bụ ruo 120MT. Isi na ngwaahịa ndị nēfe ladles, slag ite, ingot Ebu, na nkume igwe nri housings, chucks, girth gia & wheel maka ciment na Ngwuputa ígwè, egweri table ma na-egweri ala maka mills, ikpe na-ekpuchi maka nfuli, na ahu na osisi rụzie nile di iche iche nke igwe .
No.3500, XiuPu Road, 201315, Shanghai
+ 86-021- 60818967
Chinese Spring Festival Holiday Announcement
2019 New Year Holiday Notification